Yan Aung: ရှင်သန်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုး
တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းပါပဲ …
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက် ခေတ်မီနေပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ မပြည့်ဝရင် (ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် မထိမ်းချုပ်နိုင်ရင်) အဲဒီလိုမျိုး ၀မ်းနည်းစရာတွေ ကြုံလာရတတ်တာပဲ လို့ သံဝေဂ ရမိပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ ကြုံတွေ့လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ တင်းကြပ်မှုတွေကို ဖြေဖျောက်တဲ့နည်းဆိုတာ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်တွေမှာ မသင်ပေးပေမဲ့ ကျမတို့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေထဲမှာတော့ ပါပါတယ်။
ကိုရန်အောင် ပြောသလို …. အသက်ရှင်သန်ခြင်းဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူရမ်းကား တယောက်ရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းကတော့ သူ့တယောက် အတွက်ကြောင့် အများဒုက္ခ ရောက်စေနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့် … ရှင်သန်ခြင်းဟာ တန်ဖိုးရှိသလို …. တန်ဖိုးရှိစွာ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
တန်ဖိုးရှိစွာ ရှင်သန်နေထိုင်သူ တယောက်အတွက်သာ သူ့ရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းဟာ တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ ကျမကတော့ ထင်တာပါပဲ။
ရှင်သန်ခြင်းဟာ တန်ဖိုးရှိသလို တန်ဖိုးရှိစွာ ရှင်သန်နေထိုင်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်.
သိပ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတစ်ခွန်းပါပဲ မမေ. မှန်ပါတယ်.
ရှင်သန်တိုင်း တန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်သလို သေဆုံးတိုင်းလည်း တန်ဖိုးပျောက်ဆုံးသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး. လူရမ်းကားတစ်ယောက်ရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးယုတ်စေပါတယ်. အာဇာနည်တွေရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတဲ့ သေဆုံးခြင်းမျိုးကတော့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ရောင်နီဦးတစ်ခုပါပဲ…
ကျမရုံးကအပြန်ရေဒီယိုက ကြားလိုက်တယ်။ ကျန်ခဲ့သူ မိသားစုဝင်တွေအတွက်လဲ စိတ်မကောင်းအလွန်ဖြစ်မိပါတယ်.. သေနတ်သမားလဲ ငယ်ငယ်ကဘယ်လောက်စိတ်ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့လို့ ဒီလောက်ခါးသည်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလဲမသိဘူး။ အားလုံးက victim တစ်မျိုးစီပါပဲလေ….
သေနတ်သမားဟာ ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီး၊ အာရှတိုက်သားလို့ သတင်းတွေက ပြောနေပါလားဗျ။
စိတ်မကောင်း စရာဘဲ။ ကျောင်းသားတွေကိုမှရွေးပြီး...
နောက်သေချာပြန်ဖတ်တော့မှ၊ ပစ်သူပါ ပါသွားပြီဆိုလို့..
ဒါနဲ့ အဲဒီပစ်သူကို ဘယ်သူကဝင်ဆုံးမလိုက်တာတဲ့လည်းဟင်?။
မလေး>>ဟုတ်တယ်ဗျာ. လူတိုင်းဟာ Victim တစ်မျိုးစီပါပဲ. ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခ အထုတ်အပိုးကြီးကို သူများအပေါ်လွှဲချတာကတော့ မရင့်ကျက်သူတွေရဲ့ အပြုအမူတစ်မျိုးပေါ့ဗျာ. တကယ်ဆို သူပန်းပင်စိုက်တတ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်. ပန်းစိုက်ခြင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်လာအောင် သင်ပေးတယ်တဲ့..
ကိုသက်ဦး>>အာရှတိုက်သားပါ. ဟုတ်ပါတယ်. ကျောင်းသားဟုတ်မဟုတ်ကို Confirm မလုပ်သေးပါဘူး. ဟုတ်ဖို့များပါတယ်. သူတို့က ကျောင်းသားပေါင်း၂၆၀၀၀ လောက်ရှိတာဆိုတော့ ချက်ချင်း အတည်မပြုနိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေပုံပါပဲ. မှားသွားရင်လည်း ၂ ရှက်ကွဲနေမှာကြောက်လို့နေမှာပေါ့ဗျာ. သေချာတာကတော့ Visa တွေ ထပ်ခက်ဦးမှာပါပဲ.
မဟေမာ>>သေနတ်ပစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဘဲဥဟင်းချက်နေပါတယ်. ပို့စ်တင်တဲ့ အချိန်ကိုလည်း ကြည့်ပါ. ကျွန်တော် အလီဘိုင်ပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ. သူ့ကို ၀င်သမသွားတာကတော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်. ဒါမှမဟုတ် မဟေမာရေးတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားနှိမ်နင်းရေး Thesis ကို ဖတ်ဖူးတဲ့ တစ်ခြားကျောင်းသားတစ်ယောက်ယောက်က အသေခံ ၀င်လုံးသွားတာလားမှ မသိတာ. မဟေမာလည်း ဂရုစိုက်နော်. ကျောင်းထဲကို ဆင်တွေ ၀င်နင်းတက်တယ်တဲ့.
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ဒုက္ခပေးတယ်, သူတပါးကိုလဲ ဒုက္ခပေးတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးကို “အတ္တန္တပေါ ပရန္တပေါ” လို့ ဆိုတယ်ဗျာ။ ဒီလိုလူတွေ ဘယ်လို အယူဝါဒကို ဆုတ်ကိုင်ထားသလဲတော့ မသိဘူး။ သေချာတာကတော့ အစွန်းရောက်သူတွေ ဖြစ်မှာပါပဲ။